Indawo ka-Annies ngakwiBhulorho yeentyatyambo ~
Njengondwendwe e-Annie's Place, yonwabele ukufikelela kwigumbi elinencasa, elihlaziyiweyo, eliquka ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala, isofa eneendawo zokulala ezi-2, igumbi lokulala eliphangaleleyo, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, iTV kunye ne-Intanethi.Kukho iveranda yangaphambili kunye negumbi lodaka ukuze kube lula. Igcinwe ngokucokisekileyo kwaye ibekwe kwindawo ephakathi kwelali.Paka nje kwaye uhambe uye kwiivenkile ezikhethekileyo, iindawo zokutyela kunye neBridge yeentyatyambo. IiNgxangxasi zeShelburne, ezichongwe njengenye yeendawo ezili-15 “ezibalaseleyo eMelika.”
Ixhaswe nguMlambo iDeerfield, iShelburne Falls ifumaneka ngaphandle kweMohawk Trail, kunye nokuqhuba okufutshane ukuya kwi-I-91.Fumana umoya wobuhlobo kunye nomtsalane welali kwaye ujonge phambili kumabuyelo amaninzi.
4.98 · Izimvo eziyi-142
IiNgxangxasi zeShelburne zamkelwa kumazwe ngamazwe ngeBhulorho yeentyatyambo kunye nemingxuma yomkhenkce. Sizizityebi ngamagcisa, amagcisa, iimvumi kunye neefama kunye noluhlu olunomtsalane lweendawo zokutyela ezithandwayo kunye neevenkile ezizodwa.
Ndihlala kufutshane nemizuzu ukusuka kwindawo ka-Annie, kunye nomnxeba kude!